CMO-on-the-Go: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနကိုကြီးမားတဲ့အလုပ်သမားတွေဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်သလဲ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 20, 2018 တနင်္လာနေ့မတ်လ 19, 2018 Renae ဖြစ်သူ Scott
CMO တစ်ခု၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည် (၄) နှစ်ကျော်မျှသာရှိသည်- C-suite တွင်အတိုဆုံး။ အဘယ်ကြောင့်? ဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်ဖိအားနှင့်အတူ, burnout မလွှဲမရှောင်ဖို့လာမယ့်ဖြစ်လာသည်။ CMO-on-the-Go ဖြစ်ခြင်းသည်အကြီးအကဲများအားမိမိတို့၏အချိန်ဇယားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီးသူတို့တတ်နိုင်သမျှကိုသာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလုပ်နှင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေသည်။
သို့သော်လည်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် CMO ၏ရှုထောင့်မှအကျိုးအမြတ်မရှိဘဲအရေးပါသောမဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသော်လည်းစားပွဲပေါ်သို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကအလုပ်အမှုဆောင်အဆင့် Gig လုပ်သားများကစားရန်လာရာအရပ်ပါပဲ။ ၎င်းတို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် CMO အနေဖြင့်အချိန်ပိုင်းအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်ခန့်သာဖြစ်နိုင်သော CMO ငှားရမ်းခကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
အပိုင်းအစငယ်တစ်ခုဖြစ်သော CMO သည်အတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်နှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည် C-suite၊ board များနှင့်အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်နက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အကြီးစားစီးပွားရေးတွင်ပါဝင်သော CMO တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပြည့် CMO ၏တာ ၀ န်များကိုထင်ဟပ်စေသောတာဝန်များရှိသည်။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နှင့် CEO ဖြစ်သူမှအစီရင်ခံရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ ဒါကိုမကိန်းပြည့်အခြေခံပေါ်မှာလုပ်တာပါ။ Gig စီးပွားရေးလုပ်သားတွေလိုပဲငါဟာ Abuelo's, The Cookie Department နှင့်အခြားသူများအတွက် CMO ဖြစ်ခြင်းအပါအ ၀ င်ပိုပြီးရိုးရာအလုပ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိစဉ်ကငါဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့အဆက်အသွယ်များ၏ကွန်ယက်မှအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့် Gig အလုပ်သမားများ?
ကျွန်ုပ်မေးလေ့ရှိသောအမြားဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခှနျးတစျခုမှာ Gig လုပျသူမြားသညျစျေးကွက်ဌာနမြားသို့အဘယျသို့ယူဆောင်လာသနညျး။ ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ Gig လုပ်သားသည်ရေရှည် ၀ န်ထမ်းများအသင်းသို့ဝင်ရောက်သောအခါထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကောင်းဆုံး - အသစ်ရောက်ရှိလာသောထံမှ“ လတ်ဆတ်သောမျက်လုံး” နှင့်အချိန်ပြည့်အဖွဲ့မှအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုပေးသည်။
အဆိုအရ PayScaleCMO အတွက်ပျမ်းမျှလစာမှာဒေါ်လာ ၁၆၈၇၀၀ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စတင်တည်ထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဒီလခကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအချိန်ပြည့်ငှားရမ်းရန်မတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် CMO တစ်ယောက်ဟာတူညီတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့် ဦး ဆောင်မှုကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပေးနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် CMO ကိုအပြင်လူတစ် ဦး အဖြစ်ဆက်ဆံရန်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သောအချိန်ကာလများပါ ၀ င်ပါကကုမ္ပဏီသည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးပြီးပြည့်စုံသောပညာရှင်တစ် ဦး ၏စျေးနှုန်းမကြီးဘဲအကျိုးအမြတ်ကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက Gig အစီအစဉ်သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိများအားပိုမိုခိုင်မြဲသောဆက်ဆံရေးကိုမောင်းနှင်ရန်စမ်းသပ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ (ငါကဲ့သို့) Gig လုပ်သားအများအပြားစာချုပ်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးတန်ဖိုးထားဖို့perfectlyုံကျေနပ်မှုရှိနေစဉ်, အခြားသူများကိုမှန်ကန်သောရာထူးများအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အချိန်ပြည့်လာမယ့်ဖျော်ဖြေလိမ့်မယ်။ တစ် ဦး က Gig အစီအစဉ်နှစ် ဦး စလုံးကတိကဝတ်မတိုင်မီကြောင်းစူးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ရန်မျှော်လင့်သော CMOs များအတွက်သိကောင်းစရာများ
အကယ်၍ သင်သည် CMO တစ်ယောက်ဖြစ်လျက်ပင်မီးလောင်ဒဏ်ရာများကိုစတင်ခံစားနေရပါကသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုကုမ္ပဏီများအားကန်ထရိုက်စာချုပ်အရမည်သို့ယူဆောင်လာနိုင်ကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသင် Gig အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောပြပါ။ သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ရောင်းချသူများထည့်သွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းမြောက်မြားစွာ၏အတွင်းပိုင်းရှုမြင်ချက်ရှိပြီးအလုပ်အမှုဆောင်မှထွက်ခွာသွားလျှင်တံခါးဖွင့်ထိုင်ခုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အလွတ်တန်းလုပ်ငန်း၌ဖော်ပြသောထိပ်တန်းအတားအဆီးတစ်ခုမှာ ဝင်ငွေခန့်မှန်းရခက်။ အကန့်အသတ်မရှိမီ, အလွတ်တန်းအလုပ်၌မလွှဲမရှောင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သောဘဏ္ebာရေးအခက်အခဲများနှင့်စီးဆင်းမှုများအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ သငျသညျပိန်ကြုံသောကာလအတွင်းရှေ့ဆက်ဖို့ဘဏ္toာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပြင်ဆင်ထားသေချာအောင်လုပ်ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်သည်ကျယ်ပြန့်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြီးမားသောစီးပွားရေးကို ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝဖြစ်နိုင်သည်။
အလွတ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်များငှားရမ်းခြင်း၏အားသာချက်များကိုအဖွဲ့အစည်းများကလက်ခံသောအခါထိုဆက်ဆံရေးသည်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သည်။ Gig CMOs များသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များ၊ တတ်နိုင်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများပေးနိုင်သည်။ အလှည့်၌, Gig အလုပ်သမားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အကျိုးအလုပ်နှင့် burnout လျော့နည်းရှိပါတယ်။
Tags: အကြီးအကဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိစင်ကာပူအငှားအတွက် cmoသွားလာရင်း cmoGig စီးပွားရေးကိုGig လုပ်သားများ
Renae ဖြစ်သူ Scott
ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကာလအတွင်းအဓိကစားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ရောင်းအားနှင့်အမြတ်အစွန်းများများတိုးပွားလာသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့်ကုန်ထုတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာ၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွသောအဖွဲ့တည်ဆောက်သူနှင့်အပြည့်အဝစေ့စပ်ထားသောအမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ထုပ်ပိုးထားသောကုန်ပစ္စည်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ခိုင်မာသောဂိမ်းခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှု။